अजित घिमिरेले ल्याए ‘कालीको ठुम्का’ भिडियो हेर्नुहोस् - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
अजित घिमिरेले ल्याए ‘कालीको ठुम्का’ भिडियो हेर्नुहोस्
﻿काठमाडौं । अजित घिमिरेको स्वरमा रहेको गीत ‘कालीको ठुम्का’ सार्वजनिक भएको छ । गायक घिमिरेकै शब्द रसङ्गीत, उदयराज पौडेलको एरेञ्ज र कार्टून क्रुज तथा भीमफेदी गाइजको बेजोड नृत्य रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
गायक अजित घिमिरेले यस अघि साङ्गीतिक एल्बम ‘प्रस्तुति’ सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्गीतका साधक घिमिरे हाल अमेरिकाको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनले लुजियाना स्टेट युनिभरसिटीबाट वातावरण विज्ञापनमा पी.एच.डी. गरेका छन् ।